Ciidamada Isra'iil oo cagta mariyey dad ka mudaharaadayey dhul-boobka Yuhuuda [Sawiro] - Horseed Media
Ciidamada Isra’iil oo cagta mariyey dad ka mudaharaadayey dhul-boobka Yuhuuda [Sawiro] January 13, 2013
Ciidamada Israa’iil ayaa subaxnimadii hore ee maanta (Axad) weerar ku qaaday boqolaal dad ah oo mudaharaad nabad ah ka dhigayey bariga magaalada Barakeysan ee Qudus.
Dadka Mudaharaadayey oo u badan Falastiiniyiin iyo dad kale oo ajaanib ah, kuwaasi ayaa kasoo horjeeda qorshaha Isra’iil ay ku dooneyso inay ku boobto dhul badan oo ay Falastiiniyiinta ay leeyihiin oo ku yaal Bariga magaalada Qudus (East Jerusalem).
Dowlada Isra’iil ayaa dhawaan shaacisay inay 3000 (Sadex kun) oo guri ay Yuhuuda dhulka la wareega uga dhisi doonto dhulka Falastiinyiinta ee bariga magaalada Qudus, aaga loo yaqaan (E1). Qorshahan ayey Isra’iil uga hortageysaa inay Falastiinyiinta ay mustaqbalka ku dhawaaqaan dowlad madax banaan. Mashruucan gurya dhisida ayaa labo qeybood u kal ajaraya dhulka Falastiinyiinta kusoo hareen ee Daanta Galbeed (West Bank).
Dad gaaraya 200 oo qof ayaa mudaharaad ka bilaabay deegaanka la doonayo in guryaha laga dhiso ayagoo halkaasi teendhooyin ka dhistay waxayna bilaabeen inay halkaasi seexdaan, hase yeeshee ciidamada Isra’iil oo gaaraya 500 ayaa xalay saqdii dhexe illaa arooryadii hore ee Saaka weerar ku qaaday dadkaasi oo qaarkood xabsiga la dhigay, halka kuwo kale oo dhaawacyo ay soo gaareen isbitaalada la geeyey.
Dadka halkaasi ka mudaharaadayey ayaa sheegay in ay ka gadoodsan yihiin dhul boobka ay isra’iil dhul balaarsiga ku sameenayso, waxayna sheegeen inay si nabad ah u mudaharaadayeen balse lagala hortagay weerar iyo jirdil. Dhanka Booliiska Isra iil ayaa sheegay in Maxkamada Isra’iil ay u fasaxday in la baneeyo goobta ay dadkan ka dhisteen teendhooyinka amarkaasna ay fulinayeen.